Fanadiovana tatatra: fokontany 10 anaovana asa Himo - ewa.mg
News - Fanadiovana tatatra: fokontany 10 anaovana asa Himo
Nifarimbona nanadio tatatra ireo
RF2 avy amin’ny fokontany maro, nanomboka omaly. Nanala ny fako
mitoby anaty lakandrano manentsina ny fikorianan’ny rano izy ireo
hitsinjovana sahady ny fahavaratra. Mahazo tombony amin’izao
ireo fokontany folo eto Antananarivo, Ankasina, Andavamamba,
AnjezikaI, Tetezana Afovoany I, 67Ha Atsimo, Antohomadinika,
Andavamamba Ambilanibe, Anosibe, Ivolaniray, Manajary ary
Ambohidahy. Amin’ny alalan’ny Himo, andiany faharoa no
hanatanterahana izany. Olona 20 isaky ny fokontany no mahazo asa
amin’ny alalan’ity fanadiovana tatatra ity. Mahazo 5000 Ar
isan’andro avy amin’ny kaominina Antananarivo renivohitra izy ireo
amin’ny fanatanterahana izany asa izany. Nisy ihany koa ny fizarana
arovava sy savony ho an’ireo RF2 ireo. Mila fanaraha-maso akaiky ny
tandrevaka ataon’ny mponina eny amin’ireo toerana andalovan’ny
lakandrano. Misy ireo manary fako sy poti-kanina any an-tatatra ka
manentsina ny fikorianan’ny rano ary miteraka fiakaran’ny rano
mihitsy rehefa fotoam-pahavaratra.
L’article Fanadiovana tatatra: fokontany 10 anaovana asa Himo a été récupéré chez Newsmada.
Fikarohana voafonja :: Mandalo famotorana ny havan’ ireo gadra roa nitsoaka
Nihazo an’i Mananara Avaratra ny mpitandro filaminana avy any Maroantsetra manohy ny fikarohana an’ireo gadra roa lahy ambiny tamin’ireo nitsoaka ny fonjaben’i Maroantsetra, ny herinandro lasa teo. Natao famotorana ny fianakavian’izy ireo. «Samy avy any Mananara izy roa lahy. Izany no antony nandehanany any. Efa nahenoam-baovao ihany koa ny toerana mety nisitrihan’ireo gadra karohina ireo. Tsy maintsy mbola hohamarinina izany», hoy ny kaomandà Manahirana Fils Emilio, lehiben’ny kaompanian’ ny Zandarimariam-pirenena any Maroantsetra. Miara-dalana manohy ny fikarohana an’ireto gadra sisa tadiavina ireto ny zandary sy ny mpiandry fonja avy any Maroantsetra. Tsiahivina fa enin-dahy ireo voafonja tafavoaka ny fonjan’i Maroantsetra. Efa tratra ny efatra saingy maty novonoin’ny fokonolona ny iray. Mbola karohina ny roa ambiny. L’article Fikarohana voafonja :: Mandalo famotorana ny havan’ ireo gadra roa nitsoaka est apparu en premier sur AoRaha.
Tambajotran-jiolahy, voalaza fa nampihoron-koditra ny mponina amin’ny kaominina mpifanolo-bodirindrina, ao anatin’ny distrikan’i Toamasina II ity nifampitana tamin’ny zandary, ny alin’ny alakamisy hifoha omaly zoma ity. Maty voatifitra tamin’izany ny telo, raha azo sambo-belona kosa ny dimy hafa. Nirefodrefotra ny basy, ny talata alina lasa teo, hatramin’ny alarobia 14 aogositra 2019 maraina tao amin’ny kaominina mifanolo-bodirindrina, manomboka teo Ivoloina mihazo ny kaominina ambanivohitr’Ambodimandresy sy Sandahatra, Ampasimbe ary Ambodinjirofo sy Basindrano samy ao anatin’ny distrikan’i Toamasina II. Araka ny fampitam-baovao avy amin’ny zandary, tambajotran-jiolahy misa valo avy any Fenoarivo Atsinanana sy avy ao Toamasina malaza ratsy amin’ny fanafihana mitam-piadiana ao amin’ny distrikan’i Toamasina II ireto nifanehatra tamin’ny zandary ireto. Fantatra fa nandritra ny roa andro no nifanenjika tamin’ireto jiolahy ireto ny zandary. Isaky ny tanàna lalovan’ireo jiolahy ireo dia manapoaka basy ry zalahy sady mampitahotra ny fokonolona tsy hihetsika. Tokantranona mpandraharaha iray tao amin’ny kaominina Sandahatra no nidiran’ireo jiolahy an-keriny, saingy namaly tifitra ilay mpandraharaha ary tsy nanaiky ny fampihorohoroana nataon’ireo jiolahy azy. Notifirin’ireo jiolahy anefa ity raim-pianakaviana ity ka namoy ny ainy avy hatrany, ny alarobia maraina teo ary norobain-dry zalahy avokoa ny entam-barotra rehetra tao an-trano. Nahazo antso avy amin’ireo fokonolona ny zandarimariam-pirenena ka nametraka ny sakana tamin’iny distrikan’i Toamasina II iny ka tamin’izany no nahazoan’izy ireo loharanom-baovao fa misy lehilahy iray mampiahiahy mihazo an’Antsiranambe ho any Basindrano.Tratra teo amin’ny fiantsonan’ny taksiborosy…Napetraka ny vela-pandrika ka voasambotra Rakotoniaina Jhonny, 32 taona avy any Sahavola Fenoarivo Atsinanana. Nogejaina avy hatrany ny telefaonina findainy ka niainga teo ny famotorana sy ny vela-pandrika ireo namany. Vokany, tratra teo amin’ny fiantsonan’ny taksiborosy mihazo an’i Fenoarivo Atsinanana i Kika Gidore 28 taona avy any Mangarivotra Fenoarivo Atsinanana. Hitan’ny zandary tao anaty telefaonina findain’izy roa lahy ny mombamomba ireo namany ka teo no nahafahan’ny zandary nanao ny vela-pandrika ka nahafahana nandrava ireto andian-jiolahy ireto. Nisy tamin’izy ireo aza no mbola niafina tany anaty ala, araka ny fanazavan’ny zandary hatrany. Nitohy tao anaty ala ny fifanjevoana teo amin’ireo jiolahy sy ny zandary, ny alin’ny alakamisy hifoha zoma. Vokany, maty voatifitry ny zandary ny telo tamin’ireo jiolahy. Azo sambo-belona kosa i Serge, 35 taona avy ao Ampasimpotsy Fenoarivo Atsinanana, i Jean de Dieu Félicien, 32 taona avy ao Ambomozinga Sandahatra Fenoarivo Atsinanana zanatany, i Toto François 24 taona avy ao Toamasina (olona iray mpanome vaovao ireo jiolahy ny iray amin’izy ireo). Tafaporitsaka ary mbola karohina kosa ny lehilahy iray mpividy halatra.Sajo sy Jean ClaudeL’article Nirefodrefotra mandra-marain’ny andro ny basy: jiolahy telo maty voatifitry ny zandary, 5 azo sambo-belona a été récupéré chez Newsmada.
Nifandona tamina fiara iray ny môtô « scooter » iray nandalo tetsy Ankoron drano, omaly antoandro. Nifatratra tao amin’ny vodin’ny fiara ilay kodiaran-droa. Naratra tamin’izany ny mpamily nitondra azy. Vaky kosa ny fitaratry ny fiara. Ireo olona teo amin’ny manodidina nahita ny fitrangan’ny loza no nitondra ilay maratra tany amin ’ny toeram-pitsaboana. Tsy misy atahorana ny ainy. L’article Loza est apparu en premier sur AoRaha.
Tsipy kanetibe – «Afrique 2019»: resy teo amin’ny ampahefa-dalana ny Gasy
Tsy namokatra ny ekipam-pirenena malagasy, nandritra ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika, taranja tsipy kanetibe olon-telo miaraka, lehilahy. Fifaninanana, notanterahina tany Lomé, Renivohitr’i Togo, ny 13 ka hatramin’ny 17 jona, lasa teo.Ratsy ny vokatra satria nihintsana teo amin’ny ampahefa-dalana ny Malagasy. Resin’i Benin, teo amin’izany dingana izany, ry Mamy, Aly, Tafita ary i Bondy. Afa-bela, tamin’ny Malagasy izany ry zareo Beninoa, izay lavon’i Madagasikara, teo amin’ny famaranana, nandritra ny fiadiana ny ho tompondaka eran-tany, natao teto Madagasikara, ny taona 2016.Nihintsana teo amin’ny ampahefa-dalana ihany koa ny Malagasy, teo amin’ny fifaninanana mitifitra “tir de precision”. Na izany aza, nahazo ny tapakila hiatrehana ny fiadiana ny ho tompondaka eran-tany, ihany ny Malagasy, raha tsy misy ny fiovana. Marihina fa tsy nisy afa-tsy firenena 9, tamin’ireo 25 mpikambana ny hany nandray anjara, tamin’ity fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika, ity.Tsy mbola fantatra kosa na mety hanan-kery na tsia ity fifaninanana, natrehin’i Madagasikara, ity, noho ny olana misy eo amin’ny kaonfederasiona sy ny federasiona iraisam-pirenena. TompondakaL’article Tsipy kanetibe – «Afrique 2019»: resy teo amin’ny ampahefa-dalana ny Gasy a été récupéré chez Newsmada.
Maintirano: Nahazo fampitaovana avy amin’ny Fitondram-panjakana ihany koa
Hialana tsiny indrindra ny fisian'ny teny frantsay rano iray ato amin'ity lahatsoratra : « Maintirano: Nahazo fampitaovana avy amin’ny Fitondram-panjakana ihany koa » ity fa nisafidy izahay ato amin'ny ewa.mg ny hampiseho azy satria saropady ny aretina Coronavirus ka tokony ho fantatry ny mpiray firenena izay mombamomba azy.Taorian’ny Distrikan’i Besalampy dia nahazo ny anjara birikiny ihany koa ny Distrikan’i Maintirano amin’izao ady ataontsika handresena ny valanaretina « coronavirus » eto Madagasikara izao. Fitaovana maro fitsaboana marary sy ho ampiasain’ny mpiasan’ny fahasalamana izay ahitana: « Radiographie numérique – Respirateur – Concentrateur d’oxygène – Surblouses – Combinaisons – Masques chirurgicaux – Masques FFP 2 – Sel – Lingettes – Gants » no natolotra tamin’izany. Hita amin’izao fa tsy mikely soroka ny Fitondram-panjakana sy ny Ministeran’ny Fahasalamam-bahoaka mitady vahaolana handresentsika io valanaretina io. Nampita vaovao: DRSP Melaky L’article Maintirano: Nahazo fampitaovana avy amin’ny Fitondram-panjakana ihany koa a été récupéré chez Ministère de la Santé Publique.
Fotodrafitrasa hampihenana ny fitohanan’ny fiara: hamboarin’ny kaominina ireo lalana simba eto an-dRenivohitra
« Tafiditra amin’ny veliranon’ny ben’ny Tanàna, Andriantsitohaina Naina ny hampihenana ny fitohanan’ny fifamoivoizana amin’ny alalan’ny fanamboarana ireo lalana. Maro ireo hatsaraina sy hamboarina. Efa ela no niandry izany ireo mpampiasa lalana satria efa maro ny simba amin’izy ireny », hoy ny tale misahana ny Taotrano sy ny asa vaventy (DTP) eo anivon’ny CUA, Razafimandimby Bodosoa. Nanteriny fa efa nisy ny fanamboarana nataon’ny kaominina nandritra ny fotoana fihibohana tamin’ny alalan’ireo fitaovana sy ny vola teo am-pelatanana. Nangataka fiaraha-miasa teo anivon’ny ministeran’ny Fanajariana ny tany sy ny asa vaventy (MATP) sy ny « FER » anefa ny CUA noho ny habetsahan’ny lalana simba.Hovitaina mialohan’ny fotoam-pahavaratraAnton’izany ny mba hahafahana manohy indray ny fanamboarana ka nojerena manokana ireo noheverina fa laharam-pahamehana amin’ireo faritra ahitana lalana simba.Hotohizan’ny MATP ny fanamboaran-dalana amin’ireo tsy tafiditra amin’ireo hotanterahina ato ho ato. Nohitsin’ny DTP fa tena anisan’ny manimba ny lalana ny fahatsentsenan’ny lakan-drano. Anisan’izany ny eny amin’ny 67 ha, tena simba tokoa. « Entanina hatrany ny mponina mba tsy hanary ny fako sy ny maloto any anaty lakan-drano ho fikojakojana ny lalana », hoy ihany izy. Ezahina hovitaina mialoha ny filatsahan’ny orana ny asa fanamboaran-dalana rehetra eto an-dRenivohitra, araka ny nambarany hatrany.Synèse R. L’article Fotodrafitrasa hampihenana ny fitohanan’ny fiara: hamboarin’ny kaominina ireo lalana simba eto an-dRenivohitra a été récupéré chez Newsmada.
Famokarana fanafody :: Hisokatra ny ozinina Pharmalagasy
Hisokatra amin’ny fomba ofisialy, rahampitso, ny orinasa malagasy mpamokatra fanafody eny Tanjombato na ny Pharmalagasy. Ho avy hitarika ny lanonana eny an-toerana ny Filohan’ny Repoblika, Andry Rajoelina. Na mbola tsy nisokatra aza dia efa nanomboka nihodina namokatra an’ilay fanafody CVO+, fanefitry ny valanaretina Covid-19, ny Pharmalagasy. Efa manana ny paika momba an’ireo famokarana fanafody hafa io orinasa io. « Hisy fanafody dimy hafa hovokarina ao anatin’ny telo taona manaraka. Fanafody azo avy amin’ny zava-maniry eto an-toerana avokoa ireo. Mety hisy amin’ny endriny menaka izany. Ny famoronana asa ho an’ireo tantsaha eto amintsika no isan’ny nampirisika antsika tamin’ny fananganana an’ity orinasa malagasy mpamokatra fanafody ity », hoy i Holijaona Raboanarijaona, filoha mpitantana ny fandaharanasam-pampandrosoana « Émergence Madagascar », eo anivon’ny fiadidiana ny Repoblika. L’article Famokarana fanafody :: Hisokatra ny ozinina Pharmalagasy est apparu en premier sur AoRaha.
Tontosa ny 60% hatramin’ny 90%-n’ny asa: ho vita ny volana janoary ny Akademian’ny zavakanto
Fotodrafitrasa iray lehibe, hisy ny Akademia nasionalin’ny zavakanto sy ny kolontsaina na ny Anac no hatsangana etsy Ambohitsorohitra ambany. Miandry fatratra ny fahavitany ireo mpisehatra eo amin’ny tontolon’ny zavakanto sy ny kolontsaina.Goavana ! Izay no azo hanasokajiana ity fotodrafitrasa iray ity. Ireo izay mandalo eny Ambohitsorohitra ambany, manoloana ny farihin’Anosy dia mahatsikaritra avokoa ny fihazakazak’ilay tranobe hahorina eo. Ny Akademia nasionalin’ny zavakanto sy ny kolontsaina (Anac) io, izay tafiditra anatin’ny vina napetraky ny filoham-pirenena sy ny minisitera tompon’andraikitra amin’ny fampiroboroboana ny tontolon’ny kolontsaina marolafy. Nisy ny fidinana ifotony, nataon’ny minisitry ny Serasra sy ny kolontsaina, Andriatongarivo lalatiana sy ireo mpiara-miasa aminy teny an-toerana, omaly. Fantatra tamin’izany fa manodidina ny 60% hatramin’ny 90% eo ho eo izao ny tontosa amin’ireo asa goavana. Mizara efatra mazava ny asa tontosaina ao ka anisan’izany ny toerana lehibe fanaovana fampisehoana, izay efa tontosa hatramin’ny 60%. Eo koa ny toerana hanaovana ny fampirantiana efa mananika ny 80 % ny asa. Ireo trano ho an’ny birao samihafa kosa dia efa mananika ny 90% ny fahavitany. Miandry farany kosa ny fanatsarana ny endrika ivelany sy ny manodidina ny trano iray manontolo. “Raha tadidintsika, ny 15 novambra 2019 no nametrahantsika ny vato fototra voalohany teto, ary notombanana ho vita amin’ity faran’ny volana septambra 2020 ity ny asa rehetra. Noho ny zava-nisy anefa, nisy ny fahatarana ka vinavinain’ny orinasa miandraikitra ny fananganana ny Anac ho vita ny faran’ny volana janoary 2021 ny asa rehetra”, hoy ny nambaran’ny minisitra teny an-toerana. Miezaka manenjika ny fahatarana amin’ny fahavitan’ny asa, araka izany, ny orinasa miandraikitra ny fananganana ny tranoben’ny Anac. Etsy an-kilany, nanambara koa ny minisitra fa efa eo am-panomanana ny rijantenin-dalàna mahakasika ity akademia ity ny eo anivon’ny minisiteran’ny Kolontsaina sy ny serasera. Tombanana ho efa miasa tsara sy hihodina, araka ny antom-pisiana ny akademia nasionalin’ny zavakanto sy ny kolontsaina, amin’ny telovolana voalohan’ny taona 2021.Zo ny AinaL’article Tontosa ny 60% hatramin’ny 90%-n’ny asa: ho vita ny volana janoary ny Akademian’ny zavakanto a été récupéré chez Newsmada.
EST : Nivoaka, omaly, ny anaran’ireo mpandresy tamin’ilay fifaninanana tonon­kalo, mahakasika ny tantaran’ny fanatanjahantena ao Toliara. Telo mirahalahy ny nandrombaka ny laharana telo voalohany, samy nahazo loka avy amin’ny fikambanana Espoirs sportifs de Tuléar”. Laharana voalohany Randrianasolo Chedrique, nahazo Polo EST; faharoa i Hylari Jamal, nahazo tee-shirt EST ary fahatelo kosa i Narcy Kovni, nahazo “mug” EST. Tsy nanadino nisaotra ireo rehetra nandray anjara ny filohan’ny EST, i Vital Serge.Karate : Hanomboka, anio, eny amin’ny Akademia nasionaly ny fanatanjahantena, Ampefiloha, ilay fampiofanana “kata”, homena ireo mpikatroka valo hatramin’ny 14 taona. Fiofanana hifantenana izay karatekas mendrika ka hisolo tena an’i Madagasika amin’ny fiadiana ny tompondaka an’i Afrika “kata en ligne”. Haharitra roa andro ny fiofanana ahafahana mijery ny fahaiza-manaon’ny mpikatroka tsirairay, raha ny fanazavan’ny avy eo anivon’ny federasiona. Izay tena mahay sy mahafapo no halaina horonantsary ka alefa hifaninana manerana an’i Afrika.Nangonin’i Mi.RazL’article Sombintsombim-baovao a été récupéré chez Newsmada.
Ambatondrazaka: lehihaly hita faty, tsy nisy loha sy tanana
Nampivarahontsana ny mponina ao amin’ny fokontany Ambalakininina-Am­bato­so­rata, Ambatondrazaka, ny tranga niseho, omaly maraina. Lehilahy iray sahabo ho 47 taona hita faty tsy nisy intsony loha sy tanana ary tongotra. «Mipetra-drery io lehilahy io, matetika mamo koa izy. Tato ho ato, tsy hitan’ny mponina nandalolalo teny amin’ny manodidina izy, izao hita faty izao», hoy ny fanazavan’ny zandary. Efa namoaka fofona ny vatany. Mety nosaritahin’ ny alika ny razana, antony tsy nahitana intsony ny lohany sy tanany ary ny tongony, raha ny fanazavana voaray.Noha­ma­fisiny tamin’izany fa somary mifanalavitra amin’ ireo trano eny amin’ny manodidina ny fonenan’ilay namoy ny ainy. Antony tsy nahitan’ ny olona azy tao anatin’ny fotoana vitsivitsy izay.Henintsoa HaniL’article Ambatondrazaka: lehihaly hita faty, tsy nisy loha sy tanana a été récupéré chez Newsmada.
Fidinana ifotony : hitokana zava-bita any Ambatondrazaka ny filoha Rajoelina
Hatevina ny fandaharam-potoan’ny filoha Rajoelina Andry amin’ny fidinana ifotony any Ambatondrazaka, anio. Hitokana zava-bita sy hijery ny fizotry ny asa amin’ireo fotodrafitrasa nampanantenainy ny tenany.Anisan’ny hotsidihiny ny fahavitan’ny fanamboarana ny lalana tara, 800 m miainga eo amin’ny seranam-piaramanidin’i Feramanga – Avaratra mivoaka ny lalam-pirenena RN44. Nametrahana andrin-jiro koa ny faritry ny seranam-piaramanidina sy ny lalana. Vita koa ny fananganana ny EPP manara-penitra ao Ambatondrazaka. Mahazaka mpianatra miisa 600 ary ahitana ny kilasy « préscolaire » hatramin’ny T5. Hisitraka toeram-pianarana « informatique » sy « cantine scolaire » ny mpianatra. Vaovao ny fitaovana toy ny dabilio, ny biraon’ny mpampianatra sy ny fitaovam-pampianarana.Ankoatra izany, efa mandroso sy an-dalam-pamaranana ihany koa ireo fotodrafitrasa sasany. Vita 80% ny fananganana ny kianja manara-penitra Rasolonjatvo ao Ambatondrazaka. Efa voapetraka ny « tapis synthétique ». Efa voatsangana ny «tribune » ary nampitomboina izany raha mitaha amin’ny teo aloha.Tosika fameno sy Vatsy tsinjo ary hazavanaMihoatra ny 60% koa ny fanatanterahana ny asa fananganana tetezana « pont Kafe » miaraka amin’ny fanaovana ho tara ny lalana Ambatondrazaka mankany Ambandrika sy ny tetezana « Manaingazipo » miaraka amin’ny fanaovana ho tara ny lalana 25 km ao Vohidiala, Manakambahiny Andrefana. Hitokana izany koa miaraka amin’ny fahavitan’ny EPP manara-penitra ny filoha.Hahazo koa fitaovam-pianarana feno sy tsara kalitao EPP manara-penitra Asabotsy Ambatondrazaka.Manampy izany, hizara ny Tosika fameno amin’ny alalan’ny Paositra malagasy ho an’ny olona miisa 7000 isa koa ny filoha ho fitsinjovany ireo tokantrano ao an-toerana sahirana noho ny Covid-19. Eo koa ny Vatsy tsinjo sy ny hazavana ho an’ny rehetra, tolotra efa fanaon’ny filoha amin’ny fidinana ifotony tahaka izao.Synèse R.L’article Fidinana ifotony : hitokana zava-bita any Ambatondrazaka ny filoha Rajoelina a été récupéré chez Newsmada.
Voasambotry ny polisy avy ao amin’ny CSP3 Antanimasanja Mahajanga ny lehilahy iray 30 taona monina ao Tsararano Ambony, ny alatsinainy teo. Voarohirohy ho nanao fisandohana sy fanalam-baraka ny mpitandro filaminana teo am-panaovana ny asany tamin’io fotoana io no antony nisamborana azy tao Manjarisoa. Mitohy ny fanadihadiana azy.Noraisim-potsiny teny Ampefiloha i Zily, jiolahy raindahiny amin’ny fanendahana eny amin’iny faritra iny. Ny polisy avy ao amin’ny PPA1 Ampefiloha no nahasambotra azy, ny faran’ny herinandro teo. Maro ireo olona efa nitondra faisana tamin’i Zily. Jiolahy efa mpamerin-keloka i Zily.L’article Tselatra a été récupéré chez Newsmada.
Tetikasa Ambatovy: natolotra ny Malagasy ireo sisam-bakoka
Natolotry ny orinasa Tetikasa Ambatovy ny mozea vaovao Vavitiana any Ampasimazava Toamasina ny sisam-bakoka maherin’ny 1 800, ny 22 oktobra teo. Hitany tany amin’ny toeram-pitrandrahana Ambatovy Moramanga ireo vakoka ireo, asa tanimanga tany an-toerana, toy ny vilany, ny sinibe tany, ny tavoara, ny lovia jobo, ny tavy tanimanga, sns, ary koa ny vakim-pitaratra. Araka ny daty tombana nomen’ny manampahaizana manokana momba ny arkeolojia avy ao amin’ny oniversite Antananarivo, teo anelanelan’ny taonjato faha-18 hatramin’ny faha-20 ny fotoana nisian’ireo vakoka ireo. Natolotra niraka amin’ireo koa ny boky firaiketana roa sy ny sarintany efatra mirakitra ireo asa fikarohana arkeolojika nataon’Ambatovy. Nandray izany ny tompon’andraikitra maro ao amin’ny minisiteran’ny Serasera sy ny kolontsaina.Tafiditra ao anatin’ny laminasan’Ambatovy ny fitandroana ny arkeolojia, ny rakitry ny ela, ity hetsika ity, araka ny toky nomeny voarakitra anaty bokin’andraikitra amin’ny fitandroana ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana sosialy ao anatin’ny fandaharanasa manokana PGES sy ny PGEDS.Tsiahivina fa efa nandray anjara tamin’ny fametrahana ny Foibe fikajiana ny vako-pirenena (Centre d’interprétation du patrimoine) any Toamasina ny orinasa Ambatovy, ny taona 2014. Natao izany hiarovana sy hampirantiana ho an’ny daholobe ireo zavatra nilevina arkeolojika hita tany amin’ny faritra iasan’Ambatovy eo anelanelan’i Moramanga sy i Toamasina.Njaka A.L’article Tetikasa Ambatovy: natolotra ny Malagasy ireo sisam-bakoka a été récupéré chez Newsmada.
Randrianasoloniaiko Siteny: “Tsy maintsy misy ny JO 2021”
Naneho ny heviny sy ny fomba fijeriny ny fanomanana ny lalao olympika, amin’ny taona 2021, ny filohan’ny komity olympika malagasy, Randrianasoloniaiko Siteny, nandritra ny fivoriamben’ny federasiona malagasy ny judo, ny herinandro lasa teo. Na dia sarotra aza, hoy izy, ny fanomanan-tena vokatry ny fihanaky ny valanaretina Coronavirus ,nohamafisiny fa tsy maintsy hisy ny lalao olympika (JO) amin’ny taona 2021 ary efa miomana mafy avokoa ireo atleta any amin’ny firenena sasany mandray anjara. Mila manomana toy izany ihany koa isika eto Madagasikara satria inoana fa hiakatra ny lentan’ny fifaninanana noho ny fitomboan’ny fotoana nahafahafana nanao fanazaran-tena. Tsy fotoana fipetrapetrahana intsony, araka izany, izao. Ho an’ny taranja judo manokana, efa manomboka ny fanazaran-tena ary hampitombo ny traikefan’ny mpikatroka sy hanomanana ny lalao olympika, ny fandraisan’i Madagasikara ny fiadiana ny tompondakan’i Afrika (cadets, junior, senior, kara), ny novambra sy desambra izao. Manomboka amin’ny “Tournoi de Madagasikara” ny volana Avrily kosa ny hanisana ny atleta tsirairay ka hisafidianana izay ho solontenan’ny taranja judo. Mi.Raz L’article Randrianasoloniaiko Siteny: “Tsy maintsy misy ny JO 2021” a été récupéré chez Newsmada.